‘मधेश प्रदेश’ नै सबैको अस्तित्व रक्षा गर्नेछ, यो नामलाई स्वागत गरौं ।’
मधेश शब्दावली राजनीतिक रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यो राज्यको एउटा पक्षको रुपमा मजबुतीका साथ प्रस्तुत भएको छ ।
सुरेश मण्डल, राज्यमन्त्री, प्रदेश २
प्रकाशित मिति : ४ भदौ, २०७६ , १०:४०:०० बजे
प्रदेश नं. २ सदनमा बहुप्रतिक्षित र सर्वाधिक महत्व तथा चासोको विषयहरुले प्रवेश पाएका छन् । त्यो हो, प्रदेशको नाम र राजधानी । मलाई लाग्छ, यो सँगसँगै भाषा पनि प्याकेजमै आउनुपथ्र्र्यो । तर, आएन । यसले बहसलाई सुदृढ र निष्कर्षमा पुग्न सहज बनाउँथ्यो । जे भएपनि सदनमा प्रस्तुत प्रदेश नं. २ को नाम र राजधानीको विषयमा बहस, छलफल र चर्चा सर्बत्र जारी छ ।
नामको सबालमा व्यक्ति तथा दलहरुले स्कुलिङ तथा पृष्ठभूमिको आधारमा तर्क गरिरहेका छन् भने राजधानीको सन्दर्भमा भूगोल (पायक पर्ने र केही हदसम्म बीचमा पर्ने) मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ । तर, मोटामोटी जनकपुरप्रतिको स्वीकार्यता महसुस गर्न पाईन्छ । जहाँसम्म प्रदेशको नामाकरणको सबाल छ, निकै जटिल र पेचिलो विषय बन्दै गइरहेको छ । दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले विगत डेढ वर्षदेखिको गाँठोलाई झन दरिलो बनाइदिएको छ । यसमा दुईटा दृष्टिकोण स्पष्ट देखिन्छ :
१. सत्तापक्ष (सपा–राजपा) मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमि र खासगरी २०६३, २०६४ र २०७२ आन्दोलनको सबभन्दा लोकप्रिय नारा ‘मधेश प्रदेश’को पक्षमा देखिन्छ । साथै राज्यपक्षसँग भएको ऐतिहासिक ८ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ‘मधेश प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशहरु हुनेछ’ भावनाको कदर गर्दै साथै स्वस्फुर्त रुपले जनआक्रोशले प्रायः सबै साइनबोर्डमा नेपाल सरकारको ठाउँमा मधेश सरकार लेखेर जनमत प्रकट गरिसकेको अवस्था छ । मधेश शब्दावली राजनीतिक रुपमा स्थापित भइसकेको छ । यो राज्यको एउटा पक्षको रुपमा मजबुतीका साथ प्रस्तुत भएको छ ।
मधेश भन्ने बित्तिकै पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायलाई समेट्छ । यो भूभागका सम्पूर्ण जनसमुदायको पहिचान, स्वाभिमान र सम्मानको प्रतिनिधित्व गर्छ । ‘जय मधेश’ भन्ने बित्तिकै मधेश विरोधी शक्तिको मुटु काँप्छ । जहाँसम्म हाम्रै कतिपय मधेशवादी मित्रहरु मध्य–मधेशको वकालत गर्दै आएका छन् । उहाँहरुसँग मेरो अनुरोध छ, मधेशलाई हामी आफैले मध्य, पूर्व, पश्चिम, सुपको नाममा विभाजन नगरौं । एक मधेशको अवधारणामा नै अगाडि बढौं । तसर्थ, यो प्रदेश नं. २ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ राखेर मधेशको अन्य जिल्ला तथा भूभागहरुको भावनालाई समेटेर दीर्घकालीन रणनीतिकासाथ समग्र मधेश प्रदेश प्राप्तिको लक्ष्यमा अगाडि बढौं ।
२. प्रतिपक्ष नेकपा र नेपाली कांग्रेसको धेरै हदसम्म प्रदेश नामाकरण सम्बन्धि अवधारणा लगभग एउटै हो । एउटाले ‘मिथिला–भोजपुरा’ र अर्कोले ‘मिथिला’ भनेको यदाकदा सुन्नमा आएको छ । यद्यपि संघीयता, प्रदेश बारे यी दुईटै दल कन्फ्युजनमा देखिन्छ । यी दलहरुबीच एउटा सामिप्यता छ, त्यो हो मधेश आन्दोलनको ताकतमा स्थापित संघीयता र मधेश आन्दोलनको सबभन्दा लोकप्रिय नारा ‘मधेस प्रदेश’को विरोध गर्नु । यस बाहेक यी दुई दलबीच अरुकेही मिल्दैन । उहाँहरुले कर्मकाण्डी नै भएपनि प्रतिपक्षी धर्म निर्वाह गरिरहेका छन् । नेकपा र नेकाले सात प्रदेश मध्ये कहिकतै पनि भाषाको आधारमा प्रदेशहरुको नामाकरणबारे बोलेको छैन । तसर्थ यी दुईटै दलको मुख्य अभिप्राय मधेशी जनताको चाहनामा आघात पुर्याउनु हो, यस बाहेक केहि होईन ।
अन्त्यमा, आजको दिनमा मधेश यो देशमा एउटा राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ । यो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सम्पूर्ण तराई मधेशको जिल्ला, समुदाय, भूगोल, संस्कृति, भाषा, पहिचान समग्रलाई जोड्ने एउटा मात्र शस्त्र र शास्त्र हो । यो प्रदेश नं. २ लाई भौगोलिक र राजनीतिक वैमनस्यताको कारण आठ जिल्लामा मात्र सिमित गरिएको भएतापनि यसले पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरीको पनि भावना समेटेर अगाडि बढ्दैछ । पश्चिमको मकवानपुर, चितवन, दाङ, नवलपरासी, रुपन्देही, र कपिलवस्तुका साथै बाँके–बर्दियाको पहिचान स्वाभिमान र सम्मानको निम्ति लडिरहेको छ । त्यति मात्र नभई सुपका थारु दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरुको अस्तित्व रक्षाको लागि पनि संघर्षत छन् । तसर्थ, ‘मधेश प्रदेश’ एकमात्र विकल्प हामी सामु खडा छ । यो नामलाई स्वागत गरौं । जहाँ जे पार्टी रहनुस् । तपाईको अस्मिता र अस्तित्वको रक्षा मधेशले नै गर्नेछ । जय मधेश ।